Ungayicisha Kanjani Imodi Ephephile Ku-Tumblr? - Ungakwenza Kanjani
I-Tumblr iyipulatifomu enhle kakhulu yabasebenzisi yokwabelana ngempilo yabo yansuku zonke. Kuyisikhulumi se-microblogging esisathandwa phakathi kwezithameli ze-niche. Abantu abaningi bathuthela kwezinye izinsiza ezifana ne-Facebook ne-Instagram. Ubuhle beTumblr buhlala buyinkulumo ejwayelekile ezimpilweni zethu. Yipulatifomu efinyeleleka kakhulu ongayisebenzisa ku-inthanethi. Ungaxhumana kalula nezithameli eziningi.
Namuhla sizobheka izilungiselelo ezimbalwa zeTumblr. Isici semodi ephephile singaphazamisa abafundi abaningi. Kulo mhlahlandlela, sizokwembula izinyathelo zokuyicisha.
Yini imodi ephephile yeTumblr?
Imodi ephephile ibiyisici ngaphakathi kweTumblr ukuvimbela abasebenzisi ukuthi bangaboni i-NSFW noma amabhulogi anobudlova. Abasebenzisi abaningi bayazwela futhi bafuna ukugwema okuqukethwe okunjalo. Indlela ephephile isiza ukunciphisa inani eliphelele lokuthunyelwe. Kunezigidi zabasebenzisi endaweni yesikhulumi. Kungaba nzima impela ukulandela umkhondo wokuqukethwe okufakwa yizethameli. Uhlelo lokulandela ngomkhondo lokuzenzekelayo luwenza lula umsebenzi. I-Tumblr manje ithatha indlela ehlukile kungxenyekazi yayo. Bahlose ukwenza uhlelo lokusebenza newebhusayithi ukuthi ibe yomndeni kalula. Konke okuqukethwe kwe-NSFW nokuzwelayo akutholakali esizeni. Isici semodi ephephile besikade sikuvumela ukuthi uguqule, kepha asisatholakali.
Kungenzeka Yini Ukuvala Imodi Ephephile ku-Tumblr?
Imodi ephephile ayiseyona ithuluzi elihambisanayo ku-Tumblr Platform. Abasebenzisi abakwazi ukunika amandla noma ukukhubaza insiza.
Isanda kususwa kuwebhusayithi nakuhlelo lokusebenza. Izinguquko zakamuva zenqubomgomo zenziwa ekukhangisweni kwezikhangiso. Abathuthukisi bafuna ukukhangisa endaweni yesikhulumi. Ukuphela kwendlela enokwethenjelwa yokwenza lokho kungokuqukethwe okuphephile. Kodwa-ke, manje akunakwenzeka ukucisha imodi ephephile kusuka kuhlelo lwakho lokusebenza lweTumblr. Baqala ukubeka ibhulokhi kuzo zonke izinhlobo zokuqukethwe okungalungile endaweni yesikhulumi.
Izinyathelo Zokucisha Imodi Ephephile ku-Tumblr:
Inqubo yokuvala imodi ephephile ayilula. Noma ngubani angakwenza lokho ngosizo lwalesi siqondisi esilula. Ungalandela izinyathelo ezingezansi futhi ujabulele noma yikuphi okuqukethwe. Nazi izinyathelo okudingeka uzilandele.
I-Tumblr iyipulatifomu enhle kakhulu yokuthi uhlole amabhulogi ahlukile.Yikhaya lokuqukethwe okungathandeki.Ungavakashela isixhumanisi esilandelayo - https://www.tumblr.com/ . Kuzokusa ekhasini eliyisiqalo lewebhusayithi.
Abasebenzisi kufanele bangene ngemvume kuma-akhawunti abo akhona we-Tumblr esizeni. Ungangena ngemvume usebenzisa i-ID yakho ye-imeyili nephasiwedi. Isiza futhi lenza abasebenzisi bakwazi ukungena ngemvume ngokushesha besebenzisa isixhumanisi somlingo. Ungacela isiza ukuthi sithumele lesi sixhumanisi kukheli lakho le-imeyili.
Uma usungene ngemvume, kulula ukuqala ukuhlola ideshibhodi yakho. Isayithi libonisa konke okuqukethwe okuvela kuma-akhawunti owalandelayo. Kungcono ukuthola okuqukethwe okusha kokulandelayo. Ungavakashela amakhasi akhethekile ngezinto ezizwelayo.
Okuphakelayo kokuhlola nakho kuhle ukuthola ama-NSFW amasha noma amakhasi abucayi. Kuzoba khona okuthunyelwe kwakamuva okutholakala kulesi sigaba. Ungabona isexwayiso kokuthunyelwe okubucayi. Chofoza kusaziso bese usibuka noma kunjalo.
Ungakubuka Kanjani Okuthunyelwe kweTumblr Ngaphandle kwe-Akhawunti?
I-Tumblr iyipulatifomu enhle edinga ukuthi ungene ngemvume nge-akhawunti. Abantu abaningi bayakujabulela ukubuka lokhu okuthunyelwe. Manje usungazibuka ngaphandle kokubhalisela futhi. Sithole ukulungiswa okulula okulungele izidingo zakho. Kuyakusiza futhi ukubuka okuqukethwe okungaphephile. Nazi izinyathelo zokusebenzisa iwebhusayithi yeTumbex ngezidingo zakho.
Abasebenzisi kufanele baqale ngokuvakashela iwebhusayithi yeTumbex. Kuyinto yokuhlanganiswa kwakho konke okuthunyelwe kusuka ku-Tumblr. Ungachofoza kulesi sixhumanisi - https://www.tumbex.com/ . Ikhasi lasekhaya linakho konke ukuxhumana okudingekayo ukuze uhlole amabhulogi amasha.
Ungasesha noma yikuphi okuqukethwe kusayithi ngokufaka umbhalo olula. Izobheka i-database yeTumblr bese ikutholela imiphumela.Amabhulogi amaningi awasebenzi kulezi zinsuku. I-Tumblr isusa njalo amakhasi akhombisa okuqukethwe okungazweli.
Kukhona ithuba eliphezulu lokuthi ngeke ukuthole okuqukethwe yi-NSFW ngeTumbex futhi. Abasebenzisi bangakhubaza isici sokusesha esiphephile semiphumela emihle kakhulu.
Ingabe iTumblr kufanele ilinganise imininingwane:
I-Tumblr iyithuluzi elihle kakhulu labasebenzisi lokusakaza nokubuka amabhulogi amnandi kalula. Ipulatifomu ibone impumelelo yokuqala ngenxa yokuqukethwe okungathandeki. Intsha ikwazile ukwabelana ngemibono eyehlukene nangokuphathelene nezindaba. Ngokudabukisayo, isikhathi salokho sesiphelile, futhi iTumblr isiqala ukushintsha izinto. Ipulatifomu iya ngokuqina. Bathatha amakhasi kubathuthukisi be-Youtube ne-Facebook. Njengomsebenzisi wesithangami, ngingasho ukuthi kuyadingeka ukususa okuqukethwe okuhlukanisayo. Kodwa-ke, amahlaya ayindida nokuqukethwe okungathandeki akusekho etafuleni. I-Tumblr ibiyindawo yokugcina lapho ukwazile ukukwenza lokho.
I-Tumblr iyipulatifomu enhle kakhulu enezinto eziningi zokunikeza abasebenzisi. Sincoma ukuthi uzame insizakalo ngemiphumela emihle kakhulu. Kulo mhlahlandlela, sizama ukuphendula konke ukungabaza kwakho maqondana nenkinga yemodi ephephile.
21 Amathiphu we-WhatsApp & Tricks 2020 - Kufanele Ukwazi
I-Netflix vs Amazon Prime Video - Ukuqhathanisa Okuphelele
I-PUBG Mobile vs Call of Duty Mobile - Ukuqhathanisa okuningiliziwe
Ungayisusa kanjani i-Akhawunti ye-Gmail?
bukela ama-movie we-2015 mahhala online
ama-movie amasha agcwele mahhala ku-inthanethi
siyaxolisa ukuthi le sevisi ayitholakali kumandla wakho we-youtube mp3
kuqhubeke naku-id ye-roblox
android guqula i-youtube ibe yi-mp3
amazon prime njengomfundi